That's so good, right?: A Group Challenge
အတွေ့အကြုံဆိုတာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀မှာ အများ အပြားရှိနေနိုင်သည်ပဲ။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရှင်သန်ရာ ဘ၀၊ လုပ်ကိုင်ရာ အလုပ်တွေရှိနေကြသည်လေ။ ဒီတော့လူမှန်းသိတတ်စကနေ အခုအရွယ်အထိ အတွေ့အကြုံ မျိုးစုံကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီ။ ထားပါတော့ စကားဦးသိပ်မသန်းတော့ ပါဘူး.....ငယ်ရွယ်စဉ်ဆယ်ကျော်သက် လူပျိုဖော်ဝင်စမှာ တွေ့ မြင်သိခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ပြန်ပြောပြချင်ပါ တယ်။ ၀မ်းကွဲအစ်ကိုတစ်ယောက်ရဲ့ အများနှင့်မတူ အလောင်း အစား ပြုခဲ့ခြင်းအကြောင်းပေါ့။
ကျွန်တော့်အစ်ကိုဝမ်းကွဲနာမည်က မိုက်တယ် ‘ချစ်တိုင်းအောင်’ တဲ့။ အဲဒီအချိန်တုန်းက လယ်တောတွေ ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေ လက်ညှိုးထိုး မလွဲတဲ့ ကျေးလက်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ သူတို့ မိသားစုနေထိုင်ကြတယ်။ အိမ်ကြီးကလည်း အကျယ်ကြီးဗျ။ သူ အိပ်တဲ့အိပ်ခန်းကလည်း မြို့က ကျွန်တော်တို့ တိုက်ခန်းရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ရှိတယ်။ ကိုချစ်မှာ စိတ်တူကိုယ်တူသူငယ်ချင်း တစ်စုရှိပါတယ်။ သူတို့ရင်းနှီးပုံများ တစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာအမှတ်အသားရှိတယ်ကအစ သိနေကြတာဗျ။
တစ်ယောက် နှင့်တစ်ယောက် အရာရာမှာ ဖေးဖေးမမ လည်း ရှိတတ်ကြတာ အခုစဉ်းစားကြည့်မှ ပြန်သတိရမိတာလေ။
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်မှာ ကိုချစ်တို့မြို့လေးကိုအလည် သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ စိမ်းစိမ်းစိုစို လယ်ကွင်းတွေ ၊ အရသာ ရှိလှတဲ့ သစ်သီး တွေ၊ လတ်ဆတ်တဲ့လေနုအေးတွေ အားပါး တရမြင် တွေ့ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခရီးပေါ့။ ကလေးပေါက်စတုန်းက တစ်ခါသာ မေမေတို့နှင့် ရောက် ဖြစ်ခဲ့တာ အခုဆယ်ကျော် သက်အရွယ် မှာမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းပါပဲ။ ကိုချစ်က ငယ် ငယ်တုန်းက နဲ့မတူ အတော်ထွားကြိုင်း တောင့် တင်းတာပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်း က သူ့အခန်းထဲ မွေ့ယာပေါ်အတူအိပ်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်ကို ခြေထောက်နဲ့ကားယားခွပြီး အိပ်တတ် တာ အခုလည်း ဒီ အတိုင်း။ အရွယ်ရောက်စ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ တစ်မျိုး ကြီးပဲ ခံစားရတာ ရင်ထဲ။
ပြောပြရမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ ပွတ် သပ်ကိုင်တွယ်မှုမလုပ်ဘဲ climax ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်အတွေ့ အကြုံ တစ်ခု အကြောင်း စတင်ခဲ့တာက နေရောင်ပြင်းတဲ့ နေ့ လယ်ခင်း အခန်းအောင်းတဲ့ရက်တစ်ရက်မှာပါ။ ပြတင်းပေါက်က တရုပ်ကပ် မှန်တွေကိုချ လိုက်ကာနဲ့ပိတ် နေတဲ့ သူတို့ကိုကြည့် ပြီး ကျွန်တော်ထူးဆန်းသားလို့ ထင်မိတယ်။ အချင်းချင်း ကျီစယ် နောက်ပြောင် နေကြတာ ဘာ တွေလည်း မသိပေမဲ့ သူတို့ရယ်သံများကြားက မှတ်မိတာက ကောင်မ လေးတွေနဲ့ ဘယ်လို ထိတွေ့ကစားကြတာ၊ ဘယ်ကောင်မ လေးက တော့ ဘယ်လိုဆိုပြီး ပြောဆိုကြွားဝါကြတာလေ။ မကြာပါဘူး သူတို့ ဒစ်ဆိုဒ်တွေရဲ့ အတိုင်းအတာ မာတောင် လာရင် အရှည်ဘယ် လောက်ထိရှိတာ၊ တုတ်တာတွေပြောကြ လက်တွေ့ ထုတ်ပြဖို့ ဆောင်းဆိုကြရော မကြာခင်။ ၀တ်ထား တဲ့ ဘောင်းဘီတွေ၊ ပုဆိုးတွေ အားလုံးချွတ်ကြပြီး တုတ်တွေကို မမာခင်ပျော့နေ တာကနေ မာပြီးတောင်လာတဲ့အထိလက်တွေ့ လုပ်ပြကြ ကြွားဝါကြတယ်။ သူတို့ ကြွားဝါတာတွေကို ကြည့် နေရင်း ကိုချစ်က သူတို့ကိုစိန်ခေါ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်အခွင့်အရေး ရသွား ပါရော။
သူပြောတာက မျက်လုံးကို အ၀တ်နဲ့သေချာစည်းထားပြီး အဲဒီ ဘဲ၆ပွေရဲ့ အောက်ပိုင်းခါးကနေစ ခြေသလုံးထိကို တို့ထိကြည့် ပြီး ဘယ် သူဆိုတာပြောပြမယ်။ ပြောချင်တာက အလောင်း အ စားတစ်ခု သူပြုလုပ်ကြည့်ချင်တာပါ။ ဘယ်လိုလည်းဆိုတော့ ခဏနေက ပြောခဲ့ သလို သူ့သူငယ်ချင်း၆ယောက်လုံးကို အ ထက်ပါနည်းအတိုင်းစမ်းသပ်ပြီး ဘယ်သူဆိုတာ သေချာပြော မယ်။ ကိုချစ်ရှုံးခဲ့ရင် တစ်ယောက် ခြင်းဆီရဲ့ -ီးကိုစုပ်ပေးမှာ။ ဒါပေမဲ့ သူနိုင်ခဲ့ရင် သူတို့တစ်ယောက်ခြင်းက ကိုချစ် -ီးကို စုပ်ပေးရမတဲ့။
ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ တက်ကြွလွန်းတဲ့ ဟော်မုန်းတွေရဲ့ တွန်းအားကြောင့် ဖြစ်မြောက်ခဲ့တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုများလားမသိ။ ဘာပဲဖြစ် ဖြစ် အခု ခန္ဓာ ကိုယ်ပေါ်ကျန်နေခဲ့တဲ့ အင်္ကျီတွေကို တစ်ပြိုင်နက်ချွတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ တစ်ယောက်ခြင်းစီ အင်္ကျီ ချွတ်လိုက်ကြရင်း ဒူးထောက်ပြီးထိုင်နေတဲ့ ကိုချစ်နားကို စက် ၀န်းတစ်ခုလို ၀န်းဝိုင်းလိုက်ကာ အတူတကွ ရပ်လိုက်ကြပါရော။ ကိုချစ်မျက်လုံးများကိုပိတ် အ၀တ်တစ်ခုနှု့် သေချာစီးနှောင်ပြီး မြင်ရမရ စမ်းသပ်သေးရဲ့။ ကိုချစ်က သူတို့အားလုံးအ၀တ်တွေ အကုန်ချွတ်၊ ပြီးတော့ သူ့ကိုမျက်နှာမူ ပြီးမတ်တပ်ရပ်ထားဖို့ ပြောလိုက်တာ။
ဂရုတစိုက် အ၀တ်တွေကိုချွတ်၊ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ပုံစံအနေအ ထားမျိုးစုံနှင့် ၀ိုင်းပတ်လိုက်တယ်။ သူတို့အချင်းချင်းကြည့်ကာ ကျိတ်ရယ် နေကြပေမယ့် ကိုချစ် လုံးဝမကြားရအောင် နေနိုင် ကြပါရဲ့။ သူ့အနေနဲ့ပြောနိုင်တာက သူ့ဘော်ဒါတွေ တုန်လှုပ် ချောက်ချားနေတယ်ဆို တာ။ ဘာကြောင့်ဆို ကိုချစ်က တိုးတိုး သက်သာ အသံလေးတွေကြားနေရတာ၊ တစ်ယောက်ကို တစ် ယောက် လက်ညှိုးထိုးပြီး တခိခိ ရယ် နေကြတယ်လို့ ခံစားရ တာကြောင့်။
အနီးကပ်ဆုံးတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေထောက်ကနေ စပြီးစမ်းသပ် တယ်။ ကိုချစ် လက်ချောင်းတွေဟာ ခြေချင်းဝတ်၊ ဒူးခေါက် ကွေးဆီ တဖြည်း ဖြည်း ထိတာ။ သူခံစားရတာက ခြေသလုံး တစ်ဝိုက်မှာ အမွှေးနုတွေရှိတယ်လို့။ သိထားတဲ့ ဘော်ဒါနှစ် ပွေမှာ ခြေသလုံး မွှေးမရှိတာ။ အခု ဒီလူမှာ ခြေသလုံးမွှေး ကောက်ကောက်လေးတွေရှိတယ်။ ခြေထောက်ပတ်ဝန်းကျင် အထူးသဖြင့် ခြေဖ၀ါးဝန်းကျင်ကို စမ်းရတာကလည်း တစ်ချို့ ဘော်ဒါတွေက အရမ်းကို ကလိထိုးရင် ယားယံလွယ်တတ် သူ များပါတာလေ။ ကိုချစ် လက်တွေဟာ ဖြေးညင်း ညင်သာစွာ နှင့် အပေါ်ကို တရွေ့ရွေ့စမ်းတယ် ပေါင်ခြံရှိရာသို့။ ဆီးခုံမွှေး ကို စမ်းသပ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့။ ဦးဆုံးစမ်းတဲ့ ဘဲက အမွှေးသိပ် မထူဘဲ ကွေး ကွေးကောက်ကောက် အမွှေးလေးတွေရှိတယ်။
ကျွန်တော့် ချစ်ညီအစ်ကို ကိုချစ် နောက်တစ်ယောက်ကို မစမ်းသပ်ခင် နောက်ကို ပြန်ထိုင်ချလိုက်ကာ ဘယ်သူဆိုတာ စဉ်းစား တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ညာဘက်နည်းနည်း ရွှေ့ကာ တစ်ခြား ခြေ တစ်စုံကို ကိုင်တွယ်လိုက်ပါရော။ ခြေသလုံးဆီ ပွတ်သပ်ကြည့် တော့ အတော်သန် တဲ့အမွှေးတွေ၊ ဒါတောင်ဆီးခုံက အမွှေး တွေမပါသေးဘူး။
ဆီးခုံကအမွှေးတွေကလည်း ထူတယ် ခြုံပုတ်ငယ်ပမာ။ လက် အစုံနှင့် ဗိုက်သားတလျှောက်၊ ရွှေဥပေါ်မှာရှိတဲ့ အမွှေးနုလေး တွေ ကိုလည်း ခံစားကြည့်မိပါရော။ ကိုချစ်တော့ မသိဘူး အစမ်း သပ်ခံရတဲ့လူကတော့ အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းလာပါတယ်။ အသက်ရှူ ပြင်းလာတာတွေ အပြင် ကိုချစ်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့လူ အချို့ဝိုင်းကြည့်နေဆဲမှာ မာတောင်လာကြပါပြီ။
ကိုချစ်က စမ်းသပ်ဆဲ လူရဲ့ ရွှေဥတွေကို ဆုပ်ကိုင်ကြည့်တယ် ဘယ်လောက်ကြီးလည်းဆိုတာ သိဖို့။ အဲဒီနောက် အသာပြန် ထိုင်လိုက် ကာ သူ့ညာဘက်ကို ရွှေ့ပြန်တယ်။ ခြေဖ၀ါးအစုံကို စမ်းသပ်တာပေါ့နော်။ ပြီးတော့လည်း ခြေထောက်အပြင်ဘက် တလျှောက်၊ အပေါ် ဘက် ပြန်တက်လာကာ ပေါင်ခြံအတွင်း ဘက် ကစားပြန်တယ်။
ဒီတစ်ယောက်ကတော့ အမွှေးအမျှင်နည်းပြီး တွဲကျနေတဲ့ ရွှေဥ တွေရှိတယ်ဗျ။ အတံက အောက်ကိုတွဲမကျနေတော့ ဘယ် လောက်ရှိ လည်း သဲလွန်စမရဘူးပေါ့လေ။။ ဒါကြောင့် အတံ အောက်ခြေကို အသာစမ်းကြည့်လိုက်တော့ မတ်ထောင်နေကာ သူ့ဆီညွှန်ပြနေတာ သိလိုက်ရပါရော။ ဒစ်ဆိုဒ်အရှည်နှင့် အရွယ်အစားကြောင့် ဒါဘယ်သူဆိုတာ သိနိုင်ပေမဲ့ ကျွန်တော့် အစ်ကိုက ဘာမှမပြောဘဲ သူ့လက် တွေကို အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုပဲ စမ်းသပ်စေတယ်။ သူကိုင်ထား တဲ့ ငပဲဟာ တဖြည်းဖြည်း လက်နှင့်ပြည့်လာပြီး အသက်ရှူသံ က ပိုစူးရှလာတာကြားနိုင်ပါတယ်။ ၆ယောက်စလုံးအကုန် ကိုချစ်ဆီသာ အာရုံစိုက်ကုန်ပြီထင့်။
နောက်တစ်ယောက် ဘက်လှည့်လိုက်ကာ ပေါင်သားအတွင်း ပိုင်းဆီ ဒါရိုက်ထိကြည့်ရော။ ရွှေဥတွေကို စမ်းကြည့်တာပေါ့ဗျာ။ လက် တစ်ဖက်က ရွှေဥပတ်ဝန်းကျင်ကိုပွတ်သပ် ကိုင်တွယ် ကြည့်သလို တစ်ခြားတစ်ဖက်ကလည်း ခပ်မတ်မတ်ဖြစ်နေတဲ့ အတံကြီးကို ပွတ်သပ်တယ်။ သူ့လက်ချောင်းတွေနှင့် ရွှေဥ တွေကို ဖျစ်ညှစ်ကြည့်တော့ အဲဒီ့လူခမျာ ဒူးညွှတ်ညွှတ်ကျလာ ပြီး မတ်မတ်ရပ်ဖို့ ပြန်ပြန်လုပ်ရမှန်း သတိထားမိရပါတယ်။
လူတိုင်းရဲ့ အသက်ရှူသံပြင်းထန်လာပြီအခု။ ပြီးတော့ သူဆုပ် ကိုင်ထားတဲ့ အမည်မသိလူရဲ့ -ီးဟာလည်း ပိုရှည်ပြီး တုတ်လာ သလို ထိပ်ကနေ အရည်ကြည်လေးတွေ စို့ထွက်လာပြီဆိုတာ ကွမ်းသီးခေါင်းကိုပွတ်သပ်မိစဉ်သိရပါရော။ အသက်ရှူသံမမှား အောင် အသံ မပြုဖြစ်အောင် အစမ်းခံနေတဲ့ လူခမျာ ကြိုးစား ပေမဲ့ အသံတစ်ချက်ထွက်သွားကာ ကျွန်တော့် ကိုချစ်ကို သူ ဘယ်သူဆိုတာ သဲလွန်စ ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော့်အစ်ကို ဘယ်သူဆိုတာစမ်းသပ်ပြီး သက်သေပြဖို့ သူ့ဝန်းကျင်မှာ သုံးယောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ သူဘာသဲလွန်စ တွေရပြီးပြီ၊ ဘာဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုတာ ဘာမှ မသိစေရ။ သူ့ ဘော်ဒါတွေ အားလုံး အဆုံးသတ်မှာ အံ့သြသွားစေချင်ဟန်တူ ပါရဲ့။ ကဲ....နောက် ခြေ တစ်စုံဆီရွေ့တယ်။ ပြီးတော့ သူ့လက် အစုံဟာ ခြေထောက်အတွင်းအပြင်ကို ကောင်းကောင်းရွေ့ လျားတော့တာ။
အဲဒီလူရဲ့ အတံနှင့်ရွှေဥတွေကို ခံစားပြီးနောက် မသေချာသေး ဟန်ဖြင့် တင်ပါးဆုံတစ်ဝိုက်နှင့် ကျစ်လစ်ပြီးတင်းနေတဲ့ တင် သားတွေကို စမ်းသပ်ပြီး ဘယ်သူဆိုတာ စူးစမ်းတယ်။ အ၀တ် စည်းထားတဲ့ မျက်နှာဟာ မာထောင်နေတဲ့ ငပဲနားမှာ တ၀ဲဝဲနှင့်။ တစ်ခါတစ်ခါ ထိထိ သွားသေးတာ။ ခန္ဓာကိုယ်နားအနီးကပ် နေတော့ ညည်းသံသဲ့သဲ့ကို သူကြားရပါတယ်။ အဲဒါလေးက ဘယ်သူဆိုတာ ပြောဖို့လိုပါသေး တယ်လေ။
နောက်ဆုံးခြေတစ်စုံကို စတင်ကိုယ်တွယ်လိုက်ပြီဆိုတာနှင့် မကြာခင် ဘယ်သူဆိုတာ ပြောပြနိုင်တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက် ပါပြီ။ သူ့ လက်ချောင်းတွေဟာ ခြေထောက်တွေ၊ ပေါင်ခြံ အတွင်း အပြင်နှင့် ဆီးစပ်စတာတွေကို စမ်းသပ်ရင်းလေ။ ပေါင်အတွင်းပိုင်းကို အသာ လက်လျှိုရင်း ရွှေဥတွေကို ကိုင် ကြည့်ကာ အသေအချာတစ်လုံးခြင်း အာရုံခံစားကာ အဆုံး သတ်မှာတော့ နှစ်ဥလုံး စုကိုင်ကြည့် တော့တာ။
ရွှေဥတွေကို စမ်းသပ်ပြီးနောက် မာထောင်နေတဲ့ ငပဲကို အသာ ညှစ်လိုက်ပါတယ်။ အခြားလူများထက်သေးတဲ့လိင်တံအရွယ် အစား ကြောင့် သူဘယ်သူဆိုတာ ကိုချစ်ကောင်းကောင်း သိ တာပေါ့။ သူ့ကို ပိုပိုသာသာလေး ကလိလိုက်ရင် ဒီထက် ပို တုန့်ပြန်မှု တွေလုပ် လာ မယ်ဆိုတာ သိတာကြောင့် ငပဲကို အသာလေးဆွဲ ကွမ်းသီးခေါင်းက pre-cum လေးတွေကိုပွတ် သပ်ကြည့်သလို အခြားလက် တစ်ဖက် ကလည်း ရွှေဥတွေကို အသာပွတ်သပ်ကြည့်ပြန်တာ။
နောက်ဆုံးတော့ ပထမဦးဆုံး စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့လူအလှည့်ပြန် ရောက်ရပါပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ ခြေဖ၀ါး၊ ခြေဖမိုး၊ ခြေသလုံး၊ ဒူးဆစ်ပါမကျန် သေသေချာချာကို စမ်းတာ။ မာထောင်ပြီး ရမ်းနေတဲ့ လိင်တံနှင့် ရွှေဥတွေကို ဂရုတစိုက်ပွတ်သပ်ကာ စမ်းသလို ခပ်သာသာလေးလည်း ညှစ်တယ်။ ကိုချစ် ခဏ လေးငြိမ်နေပြီးနောက် ဘယ်သူဆိုတာ သွေးတိုးစမ်းတဲ့အနေနဲ့ ပြောလိုက်ရော။ သေချာပေါက် ဒက်ထိပါပဲ။ အဖြေသိပေမဲ့ မလွှတ်သေးပဲ လက်ကစားနေ၊ ထုပေးနေတာကြောင့် ပိုင်ရှင်က ပြီးတော့မယ် မင်းဟာကို စုပ်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပါပြီ ပြောမှ လွှတ် လိုက်တာဗျ။
နောက်တစ်ခါတော့ သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို ဘော်ဒါနှစ်ပွေဆီဆန့် ထုတ်ကာ ပေါင်ကြားတွေမှာ မတ်ပြီးထောင်နေတဲ့ -ီးတွေ ကို ညှစ်ပြီးစမ်း သပ်ပါရော။ ကိုချစ် သိသွားပြီ ဘယ်က ဘယ်သူ့ ဟာဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ မသေချာသေးဟန်ဖြင့် မိနည်အနည်း ငယ်လောက် ပွတ်သပ် နေသေး တာ အစမ်းသပ်ခံလူနှစ် ယောက်ရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းမှာ အရည်တော်တော် စိမ့်ထွက် လာတဲ့အထိ။
သူ့အနေနဲ့ တင်မြင်ချက်များစွာ ပိုင်ဆိုင်ပေမဲ့ ဘယ်ဟာက ဘယ်သူ့ဟာဆိုတာ မပိုင်နိုင်သေးဟန်။ လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်နံ့တစ်မျိုး ဆီဆိုတော့ အ၀တ်စည်းထားတဲ့ မျက်နှာဟာ ဒုံးကျည်တွေနား နီးကပ်စွာ အာရုံခံသည်လေ။ အတံတွေနား ကိုချစ်နှာခေါင်းရစ်ဝဲနေသည် မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသား။ ကွမ်းသီးခေါင်းနား နှာခေါင်းတိုးကပ်လိုက်တိုင်း တံကြီးဟာ ပါးစပ်နားရောက်ရောက်လာတယ်။ သူ့ စိတ်ထဲရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အမေးတွေအတွက် အဖြေတွေထပ်ရမယ်ထင်ပါရဲ့။
အဆုံးသတ်မှာောတ့ ကိုချစ် နံပါတ် ၂ နှင့် နံပါတ် ၃ဟာ ဘယ် သူဆိုတာ လုံးလုံးလျားလျား မှန်အောင် ပြောနိုင်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ ဒီလူတွေ ကိုချစ်ကို နည်းနည်းမှ clue မပေးချင်တာ ကြောင့် ဆက်ပြီးအသံမပေးဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာနေရော။ သူတို့ လှုပ်ရှားမှု တွေကတော့ ပိုပိုတိုး တက်လာကာ ကိုချစ်ကို စက် ၀န်းပုံဝိုင်း ထားတာမှာ ပိုပြီးအနီးကပ် ရပ်လိုက်ကြတယ်။ ကိုချစ် ကတော့ နောက်တစ်ယောက်ဘက်လှည့် လိုက်ကာ ခြေအစုံက တစ်ဆင့် ပေါင်တံတွေ၊ ပြီးတော့ အဲဒီလူရဲ့ တင်းနေတဲ့တင်သား တင်ပါး တွေကို ဖျစ်ညှစ်ပွတ်သပ်လိုက်ကာ ‘ဒီဖင်ကြီးက လွမ်းဖို့ကောင်း သား’ ။ နံပါတ်၎ကိုလည်း ဘယ်သူဆိုတာမှန်အောင် ပြောနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ဆုံးနှစ်ယောက်ဘက် လှည့်ပြီး ကိုချစ်ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်ကာ သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို အဲဒီလူတွေရဲ့ ပစ္စည်းပေါ် ပြေးလွှားနေပါရဲ့။ အဆုံးသတ်ဖို့ နိဂုံးချုပ်ဖို့ ဒီဂိမ်းကို လုပ်နေ ခြင်းပေါ့။
ကိုချစ်ကိုကြည့်ရတာ ဒီကစားနည်းမှာ တစ်ယောက်ယောက်ကို အရှုံးပေးဖို့ စဉ်းစားထားတာထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပွဲမှာ ပါဝင် တဲ့လူများ ကို ကိုင်တွယ်စမ်းသပ်ရင်း ဘယ်သူ့အထိအတွေ့နှင့် ပစ္စည်းက သူ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမလဲဆိုတာကို သိချင်ဟန်။ သူ ဒစ်နှစ်ခုကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း အသာပွတ်သပ်ချိန်မှာ သူ့ပတ်ဝန်း ကျင်၌ တဖိဖိ တဖတ်ဖတ်နှင့် လက်ကစားတာရဲ့ အသံ အသက် ပြင်းပြင်းရှူသံတွေက ထွက်နေပြီ။ ကိုချစ်က ကွမ်းသီးခေါင်းတွေ ရဲ့ အောက်ခြေနား အသာဆုပ်ကိုင်ကာ ကစားပေးတယ်။ ပြီး တော့ ရွှေဥနှင့် ခရေပေါက် ကြားက ဧရိယာကိုလည်း ကစားပါ ပေ့။
တုန့်ဆိုင်းနေတဲ့ လေသံဖြင့် ကိုချစ် နံပါတ်၅ကို ဘယ်သူဆိုတာ ပြောလိုက်တာ တစ်အုပ်စုလုံးက Wrong! လို့ဝိုင်းအော်ပါရော။ နံပါတ် ၆ က ကိုချစ် မျက်လုံးမှာစည်းထားသော အ၀တ်ကို ဖယ် ရှားပေးလိုက်ပါတယ်။ ၆ယောက်လုံး ကိုချစ်ဆီကြည့်နေကြပြီး ‘ဘယ်သူဦးဆုံးလဲ? ပြီးတော့ ‘လာစုပ်စမ်း.....-ီးစုပ်သမားကြီး’ လို့ဝိုင်းပြောကြပါတယ်။
မာထောင်နေတဲ့ သူတို့အားလုံးရဲ့ -ီးတွေကို ကိုချစ်မျက်နှာ နားကို ဝှေ့ယမ်းပြကြတယ်။ ကိုချစ်ကတော့ နံပါတ်သုံးဘက်ပြန် လှည့်လိုက် ကာ အဲဒီ့လူရဲ့ rocket ကို အသာကိုင်လိုက်တာ ပေါ့။ ‘လောင်းထားတာ လောင်းထားတာပဲ’ ‘စလိုက်ကြဖို့ သင့် ပြီထင်တယ်’ လို့ စိတ်ပါ လက်ပါမရှိတဲ့ အသံနှင့်စကားဆိုပါ တယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာထိပ်ဖြစ်တဲ့ ကိုချစ်ပေါ့။
နံပါတ်သုံး ဘော်ဒါရဲ့ ပစ္စည်းကို စိုက်ခင်းထဲသွားရင်း စနောက် ကျတာလုပ်တော့ ပုဆိုးကျွတ်ကျတာကြောင့် မြင်ဖူးခဲ့သတဲ့။ လေသံက အဲဒီ့ လူရဲ့ပစ္စည်းကို အစကတည်းက စုပ်ချင်နေ ဟန်။
မမာခင်တွဲကျနေတုန်းကတောင် ၆လက်မလောက်ရှိ နေ တာ ကွမ်းသီးခေါင်း ထိပ်ရဲ့ အ ပေါက်ဝကို တန်းကနဲမြင်ရချိန် မှာတော့ ၇လက်မနီးပါးရှိရော။ လည်မျိုကို ပိုပြီးရှည်အောင် ဆွဲဆန့်သူပါ။ ကိုချစ်...အဲဒီ့ ပစ္စည်းကို အသာ အယာဆွဲကိုင်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းဝမှာတေ့လိုက်တယ်။ စိတ်ပါလက်ပါမရှိဟန် (တကယ်တော့ အဲဒါကြီးတစ်ခုလုံး လည်မျိုထဲထိ မသီးမပြု ဘဲ ဘယ်လိုသွင်းရမလဲ သိချင်နေတာ) လျှာဖျားလေးထုတ်ပြီး ကွမ်း သီးခေါင်းလေးရဲ့ အောက်ဖက် မေးသိုင်းကြိုးနေရာကိုလျက် လိုက်တယ်။
ငပဲပိုင်ရှင်က သဘောကျစွာဖြင့် သူ့လက်အစုံကို ကျွန်တော့် ၀မ်းကွဲအစ်ကိုရဲ့ ခေါင်းပေါ်တင်လိုက်တာပေါ့။ အစမ်းသဘော ဖြင့် ဖွင့်ဟ ထားသော ပါးစပ်အတွင်းသို့ အကြောတွေထောင် မာတောင်နေသော -ီးကို ဖြည်းဖြည်းထိုးသွင်းလိုက်တယ်လေ။ တိုးဝင်သထက် တိုးဝင် လာသောငပဲကို လျှာဖျားလေးဖြင့် ၀ိုက် ကာ ၀ိုက်ကာ ကစားရင်း ခပ်ဖြေးဖြေးသာ အသွင်းအထုတ် ပြု စေတယ်ကိုချစ်က။ ဟိုလူကလည်း ကိုချစ်နားရွက်လေးတွေ ကို ပွတ်သပ်ပေးကာ ခံတွင်းထဲသာမက လည်ချောင်းထိတိုင် ဖိပြီး သွင်းပါရော။ မကြာခင်မှာ ဆီးစပ်က ခြုံပုတ် ဟာ ကိုချစ် နှုတ်ခမ်း များဆီ ထိကပ်ပြီး ရွှေဥများဟာလည်း မေးစိဆီထိကပ် တဲ့အထိ ဖြစ်ကရော။ ရှည်လျား ထွားကြိုင်းလှတဲ့ ပစ္စည်း ကြီးအ ၀င် အ ထွက်ပြုဖို့ ပါးစပ်ကိုကျယ်ကျယ်ဖွင့်ရသလို တိုးတိုးဝင် လာတဲ့ အခါမှာလည်း အသက်ရှူမမှားအောင်လုပ်နေရသော ကိုချစ်ပါ။ ကိုချစ် ခေါင်းကို ထိန်းကိုင်ရင်း အသွင်းအထုတ် လုပ် နေသော လူရဲ့ တင်ပါးအစုံ တုန်ခါလှုပ်ရှားနေပုံက ကျွန်တော့်ကို တောင် ရင်ခုန်စေသး။ ခဏအကြာမှာတော့ ခပ်သွက်သွက် ခါး ကိုလှုပ် ရှားနေရာက တစ်ချက်အပြင်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ ကိုချစ်လျှာ မှာ ဗုံတံခေါက်လိုက်ပြီးမှ တဖန် လျှောကနဲသွင်းပြန် တယ်။
နှေးကွေးနေတဲ့ အရှိန်အဟုန်တွေဟာ ကြီးထွားလာပါပြီ။ တိတ် ဆိတ်နေတဲ့ အခန်းထဲမှာ ရွှေဥတွေဖြင့် မေးစိရိုက်ခတ်နေ သံကို ကြားနေရပါ တယ်။ ကျွန်တော့်အစ်ကို ကိုချစ်ရဲ့ ဆံပင် တွေ၊ ဦးခေါင်းတို့ကို ထိကိုင်ပွတ်သပ်နေတဲ့ လက်များဟာ များလှ ချည့်။ အားလုံးသောသူတွေ ကလည်း တစ်ပုံစံတည်း ပါဝင် ဆင်နွှဲချင်ကြသလေ။ လူအတော်များများကတော့ သူတို့ပစ္စည်း တွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ် ကစားနေကြ သလို အချို့က လည်း တစ်ယောက်ပခုံးတစ်ယောက် အားပြုကိုင်တွယ်ရင်း ကိုချစ်ပြုစုနေပုံကို ကြည့်နေကြတယ်။ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ တစ်ခြား သူတွေအတွက် fair ဖြစ်စေဖို့ ကိုချစ်က ခေါင်းကို အသာပြန်မော့လိုက်ကာ အစွမ်းကုန်မာထောင်ရင်း တဆတ် ဆတ်ခါကာ စောင့်နေသော အခြားငပဲ ခပ်ထွားထွားဆီ သူ့ နှုတ်ခမ်းတွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ပြင်းပျသော လှုပ်ရှားမှုများမှ ရမိလိုက်သော စူးရှသော အနံ့များဟာ ကျွန်တော့်ကိုတောင် စိတ်လှုပ်ရှားစေတာ ပေါင်ကြားက ကျွန်တော့်ညီဘွား မာထောင် လာမိတဲ့အထိ။ ကိုချစ်နှုတ်ခမ်းဖျားမှာ တော့ အရသာစုံ -ိင်တံ တွေက တစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်း။
အဲဒီလူတွေဟာ တစ်ယောက်ပခုံးတစ်ယောက်ကိုင်တားတာ တွင်မက တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ လက်မောင်း၊ ရင်အုပ်၊ တင်ပါးဆုံ တွေကို ပွတ် သပ်ဖျစ်ညှစ်ကြည့် ကိုင်ကြည့်ကြသလို လိင်တံ တွေ ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်ကြည့်ကြသေး။ ကိုချစ်ရဲ့ ရွှေဥတွေ ကို ပွတ်သပ်ပေးမှု၊ တင်းပါး အစုံကို ဖျစ်ညှစ်ပေးရင်း ပါးစပ်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ငပဲကို လျှာကစားပေးခြင်း အကူအညီတို့ကြောင့် နံပါတ်သုံးလူခမျာ နောက်ဆုံး ခါးကို ကော့ကော့ပြီး သုတ်ရည် တွေကို ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကိုချစ်လည်း တံတွေးသီး တော့မလို ချောင်းဆိုးရတော့မတတ် ဖြစ်ပြီး အဲဒီ -ီးကြီးကိုတော့ မလွှတ်ဘဲ သူ့လည်ချောင်းထဲ အထုတ်အသွင်းဆက်လုပ်နေ ပါရော။
အားရပါးရပန်းထုတ်ဖို့ သင်္ကြန်ရေပြွတ်ဖြစ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ နံပါတ်ဝမ်းလူဘက် ကိုချစ်ပြန်လှည့်လိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းအစုံဖြင့် တော့ လျှာ ဖြင့် ရစ်သိမ်းပြီး ပူနွေးနေတဲ့ အာခံတွင်းထဲ အထုတ် အသွင်းလုပ်လိုက်တာ ပါးစပ်မှ ခဏပြန်အထုတ် ကိုချစ်မျက်နှာ တွေ ပခုံးတွေပေါ် များ လှစွာသော အရည်ပျစ်တွေ ဖျန်းပက် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလူပြီးပြန်တော့ နံပါတ်၅က သူ အသင့်ဖြစ် နေကြောင်း ပြသပါ၏။
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ နံပါတ်၅ဟာ ကိုချစ်အာခံတွင်း ထဲ ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်သွင်းမှုတွေလုပ်ကာ ပါးစပ်က ခပ်တိုး တိုး ညည်းရင်း သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ နံပါတ်၅ အထုတ်အသွင်း ခပ်သွက်သွက်လုပ်နေစဉ်မှာပဲ တခြားလူနှစ် ယောက်ခမျာ ကိုချစ်ပခုံးနှင့် ကျောပြင်ပေါ် ဖွေးကနဲဖြစ်အောင် ပန်းထည့်လိုက်ပါရဲ့။
နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ လူကလည်း ခပ်သွက်သွက်လှမ်းလာကာ ပြောင်းငြာပြီး အလုပ်သိပ်မလုပ်ချင်တော့သော ကိုချစ်ရဲ့ အာခံ တွင်းထဲ မြန်မြန်ထည့်ကာ အထုတ်အသွင်းမြန်လှစွာ ဆောင့် သွင်းချက်တွေလုပ်ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ကိုချစ် ပါးစပ်ကလျှံကျ လာကာ မေးစိအထိ စီးဆင်းတဲ့အထိ အပြည့်ဖြည့်ပေးလိုက်တာ။
လူတွေအားလုံး အခန်းကြမ်းပြင်မှာ လှဲလျောင်းအမောဖြေလိုက် ချိန်မှာ နံပါတ်၃လူက ကိုချစ်နားလှမ်းလာကာ မတ်တပ်ရပ်စေပြီး နောက် ဂျင်းဘောင်းဘီ ကြယ်သီးတွေဖြုတ်ပေးပြီး ချွတ်ပစ် လိုက်ပါတယ်။ ‘တစ်ယောက်တည်း ကျန်နေလို့ ဘယ်ကောင်း မလဲကွ’ လို့ပြောပြီး ကျွန်တော့်အစ်ကိုရဲ့ ဒစ်ကို သူ့နှုတ်ခမ်း တွေနှင့် တို့ထိကစားပါတော့တယ်။
အရည်ကြည်တွေစို့ပြီး လှပရှည်လျားတဲ့ ကိုချစ်ငပဲကို တမက်တမော နမ်းရှိုက်ပြီး နောက် အာခံတွင်းထဲသွင်းလိုက်ကာ ခေါင်းကိုလှုပ်ရမ်း ခပ် သွက်သွက် အထုတ်အသွင်းပြုပါပြီ။ သိပ်မကြာပါဘူး ခဏ နေတော့ ပါးစပ်က အသာအပြင်ထုတ်ပြီး ပြန်သွင်းဖို့လုပ်စဉ် မှာပဲ အရည်ပျစ်များစွာကို နံပါတ်သုံးလူရဲ့ ရင်ဘတ်ဆီ အများ ကြီးပေး လိုက်ပါတယ်။
သူတို့တွေ အားလုံး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အတန်ကြာလှဲလျောင်း ရင်း အနားယူနေကြပြီးနောက် ညနေစောင်းပြန်တော့ အသီး သီးပြန်သွား ကြပါတယ် ရှက်ပြုံးများ မျက်နှာဆီ ပက်ဖြန်းရင်း။ ကျွန်တော့်မှာ သူတို့လို အရည်ဖြူပျစ်ပျစ်တွေ ပန်းမထုတ်နိုင် သေးတဲ့အရွယ်မို့ အရည် ကြည်သာထွက်ရင်း အိမ်သာဆီ သေး ပေါက်ဖို့ မြန်မြန်သွားရပါတယ်။
လူတွေ စုပေါင်းပြီး တစ်နေရာထဲမှာ အတူတူ -ွင်းထုကြတာကို မြင်ခဲ့ရတဲ့ လွန်ခဲ့သော သုံးလေးနှစ်က အတွေ့အကြုံပါ။ အခု အချိန်မှာ တော့ ကိုချစ်က မြန်မာပြည်မှာ မရှိ တိုင်းတပါးကို အ လုပ်လုပ်ဖို့ထွက်သွားသလို အခြားသူငယ်ချင်းများကတော့ အိမ်ထောင်ကျသူက ကျပေါ့။
Alex Aung (14/9/2010)
Posted by Alex Aung at 10:27 PM
မြန်မာနိုင်ငံ လိင်တူချစ်သူများ အခွင့်အရေး ကွန်ယက်အ...
ဆက်ဆံရာတွင် ပါးစပ်ကို အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဆက်ဆံရာမ...